Ny morontsirak'i Almería | Vaovao momba ny dia
Ny morontsirak'i Almería
Almería dia ao amin'ny fiarahamonina Andalusia ary manana tantara an-jato taonina sy morontsiraka mahafinaritra izy. Satria fahavaratra ary miakatra ny hafanana anio dia hifantoka isika ny tolotra amoron-dranomasina azy, ho an'izay rehetra manitsaka azy ireo, torapasika tsy hay hadinoina.
Ny morontsiraka dia mijanona amin'ny ampahany amin'ny Helodrano Almería, mihoatra ny 35 kilometatra, na dia misy 200 aza, ny sasany misy boulevards, ny sasany manana coves, ny fasika sy ny rano milamina, na dia tsy misy aza ireo hantsana mijoalajoala. Misy totalin'ny 16 morontsiraka, miovaova arakaraka ny kalitaony sy ny tontolony, ny serivisy ary ny fidirany, fa andao jerena izay no tsara indrindra sy atolotra indrindra.
1 Ranomasin'i Almería
2 Poniente Beaches
3 Levante Beaches
4 Ranomasina Cabo de Gata-Níjar
Ireto morontsiraka ireto dia ao anatin'ilay antsoina hoe fe-potoana monisipaly, manerana ny Helodrano Almería iray manontolo. Io morontsiraka io no manana 35 kilometatra izy ary ny enina eo aminy dia ao an-tanàna ihany.
Hay morontsiraka maro samihafa samy izy fa ny ao an-tanàna dia torapasika misy serivisy, vonona tsara handray mpitsidika. Azontsika atao ny manome anarana ny morontsirak'i Las Salinas, La Fabriquilla, Almadraba de Monteleva, Ilay malaza Morontsiraka Zapillo, la San Telmo na Torregarcía.
Ny morontsiraka Almadraba de Monteleva dia manana fasika malefaka sy madinidinika ary ampahany amin'ny valan-javaboary voajanahary. Saika virjiny io ary raha tianao ny mijery vorona dia toerana tsara izy io satria karazany maro no tonga mandany ny ririnina eto. 660 metatra ny halavany ary 30 metatra ny sakany.
Noheverina ho semi-urban izy io ary tsy manana promenade ka somary sarotiny. Fotsy ny fasika ary milamina kosa ny onja. Afaka mandeha any ianao amin'ny alàlan'ny bus lehibe na fiara. Malaza be ny torapasika Zapillo satria akaikin'ny tanàna izy io. Mirehareha amin'ny maha-morontsiraka Flag Blue. Roa arivo metatra ny halavany, manana zana-kazo tsara tarehy sy fasika miloko mainty izy. Milamina ny rano ao aminy ka olona maro no manao fisitrihana antsitrika. San Miguel de Cabo de Gata Izy io dia morontsiraka iray hafa soso-kevitra ao Almería. Io dia an'ny tanàna mitovy anarana aminy ary manana ihany koa Sainan'ny manga.
Amin'ny roa kilometatra sy sasany ny halavany ary 100 ny sakany, amin'ny antsalany, dia fahagagana amin'ny fasika fotsy. Hadinoko ny manoratra olon-kafa sasany: ny Morontsiraka Nueva Almería, morontsiraka Retamar, an'ny The Toyo, an'ny Costacabana. Raiso tanjona!
Tora-pasika Poniente Fasika mainty izy ireo ary malalaka sy miovaova isan-karazanys. Toy ny morontsiraka misy vatokely, dia misy torapasika misy fasika ary ny hafa izay mando ny hazo ao anaty ranomasina. Misy rivotra mahery ka tonga eto ny mpizahatany te-hanao fanazaran-tena fitetezana rivotra, fisidinana ary fivezivezena.
Ao amin'ny kaominina Arda misy morontsiraka telo ambin'ny folo kilometatra manana morontsiraka mahafinaritra izay lasa mpizahatany nandritra ny fotoana kelikely: ny Morontsiraka El Carboncillo, ny an'ny fanisam-bahoaka, la de la Caracola, La Sirena Loca ary San Nicolás.
Ilay zazavavindrano adala? Inona ny anarana: morontsiraka Blue Flag izy ary nahazo ny loka Q ho an'ny Tourist Quality ihany koa. Tena tsara ho an'ny morontsiraka an-tanàn-dehibe amin'ny 730 metatra ny halavany ary eo ho eo amin'ny 70 metatra ny sakany.
Raha tianao izany karazany amin'ny lafin'ny morontsiraka, zavatra manaitaitra anao, avy eo dia tokony handeha ho any amin'ny morontsirak'i Levante ianao. Ny morontsiraka amin'ity faritra Almería ity dia mankany Murcia ary ny hatsarany dia noho ny zava-misy mandalo ny Cabo de Gata Natural Park.
Misy vitsivitsy ny saika amoron-dranomasina virjiny na virjiny miafina tanteraka coves, morontsiraka misy ala maitso mikorontana ... Be hatsaran-tarehy tokoa no nahatonga ny faritra amoron-tsiraka sasany nivoatra tsara raha ny fijerin'ny tolotra fizahan-tany. Izany hoe misy trano fandraisam-bahiny, trano fisakafoanana ary fivarotana manokana amin'ny fitsidihana sy ny fanatanjahantena amoron-dranomasina. Efa ao amin'ny tanànan'ny Carboneras Misy andian-torapasika malaza, valo ny fitambarany, atolotra sy fonosina ao anatin'ny 17 kilometatra fotsiny.
Ho hitanao eto ny Tora-pasika El Corral, morontsiraka La Galera, torapasika Algarrobico (miaraka amin'io hotely io izay nitondra fanoherana maro be), ny an'ny Maty na El Ancón, mba hanonona vitsivitsy fotsiny. Playa de los Muertos dia tsara tarehy indrindra satria eo anelanelan'ny hantsam-bato, ao anatin'ny Valan-javaboary Cabo de Gata. Izy io dia morontsiraka mitokana sy mikitoantoana, tsy misy fahita momba ny tanàn-dehibe. Noho io antony io dia afaka mandeha an-tongotra fotsiny ianao. Ny valisoa dia amoron-dranomasina mihidy, voaro amin'ny rivotra ary misy rano manga sy turquoise miankina amin'ny ora amin'ny andro.
Morontsiraka mafy ho an'ny tongotra izy io, ka manaova kapa toy ny vatokely. Tsy misy fasika, na eny amoron-dranomasina, na eo amin'ny fanambanin'ny ranomasina. Ity ambany ity dia midina haingana dia haingana ary ny tombony dia satria tena madio ny rano. 950 metatra ny halavany ary 80 ny sakany. Mahafinaritra nefa manana elo satria tsy misy zavamaniry.
Raha manomboka amin'ity morontsiraka ity ny morontsiraka dia mifarana amin'ny an'i El Algarrobico, ao anatin'ny valan-javaboary voajanahary ary mizara roa amin'ny vavan'ny reniranon'i Alías. Morontsiraka mikitoantoana izy io, vitsy ny trano ary tsara tarehy. Ary malaza, tsy maintsy lazaina, satria io no hita ao amin'ny horonan-tsary Lawrence avy any Arabia.
Ranomasina Cabo de Gata-Níjar
Nijar dia amoron-dranomasina maro, iray isaky ny tsiro azonay lazaina. Misy lava-boromailaka toy ny Rajah, ny mavo, ny arina, ny antsasaky ny volana, ny andriana, ny zazavavy na ny lehibe. Izy rehetra ao amin'ny tanànan'i San José. Na izany na tsy izany, any San José dia misy moron-dranomasina ary tsy vodiondrano ihany ary toy ny eny amin'ny morontsirak'i Levante misy iray izay niseho tamin'ny sinema, dia toy izany koa no mitranga eto: ny sasany aminareo naseho tamin'ny sarimihetsika Indiana Jones. Playa del Arco, tora-pasika San José, morontsiraka Mónsul, ohatra.
Ny morontsiraka hafa dia ao Nijar fa efa miresaka amoron-dranomasina lehibe kokoa isika fa tsy coves. Misy ny morontsiraka Rodalquilar tsara tarehy, miaraka amin'ireo lava-bato manodidina, ary ny morontsiraky ny tanànan'i Agua Amarga sy La Isleta del Moro.
Ny marina dia samy manana ny moron-dranomasina ankafiziny ny isam-pokontany, ka ny hany fialan-tsasatra hanapa-kevitra dia ny karazana fialan-tsasatra amoron-dranomasina tadiavintsika: mavitrika sa mangina? Urban na wild? Amin'ny morontsiraka lehibe sa any anaty lava-piry akaiky kokoa , Lava sa tery eo anelanelan'ny hantsam-bato?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Almeria » Ny morontsirak'i Almería